Tuchel: “Qaar Ayaa Raba Inay Baxaan” – Garsoore Sports
Tuchel: “Qaar Ayaa…
Tababaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa siinaya cayaaryahan walba oo ka mid ah kooxdiisa fursad uu ku riyaaqo, laakiin wuxuu aqbalayaa in isbeddel lagu sameyn doono kooxda suuqa kala iibsiga xagaagan.
Thomas Tuchel ayaa siinaya qof walba fursad uu ku qanciyo kooxda iyadoo xiddigaha kala ah Tammy Abraham iyo Danny Drinkwater ay abuurayaan hadalheyn la xiriirinaya inay ka tagaan kooxda.
Tabaraha wuxuu qirtay in xubno kamid ah kooxdiisa “ay doonayaan inay baxaan”.
Blues ayaa xaqiijisatay booska afarta koox ee ugu sarreysa Premier League iyo inay hantaan Champions League xilli ciyaareedkii hore, iyadoo xaqiiqda ah in tababaraha reer Jarmal uu shaqada qabtay keliya bartamihii xilli ciyaareedkii 2020-21 ay saameyn deg deg ah yeelaneyso.
Tuchel ayaa haatan indhaha ku haaya inuu soo dhoweeyo xiddigaha amaahda kasoo noqonaya, iyada oo ay jiraan go’aamo waaweyn oo loo baahan yahay in laga gaadho cida sii joogi doonta iyo cida tagaysa kahor inta uuna xirmin suuqa kala iibsiga xagaaga 31 bisha Ogosto.
Muxuu yiri tababaraha?
“Kuguma xukumayo meesha aad ka timid ama taariikhdaada, ama waxaad kasbatay ama heerkaagu yahay, aniga ayaa mas’uul ka ah kooxdan sidaa darteed waxay helayaan boqolkiiba boqol cid walba. wax walba ayaan siinayaa, weey iisoo celinayaan, wey iga dhoolacadeysiinayaa, wax badan ayaan haddana siinayaa taasoo iyaga ka dhoolacadeysiineeysa, iyagana wax ka badan wixii hore ayay isiinayaan aniga.”
“Waxaad isku dayeysaa sannad walba inaad abuurto jawi gaar ah oo qof walba uu ku faraxsan yahay imaatinkiisa, qof walba wuxuu dareemayaa qiimo, qof walba wuxuu dareemayaa kalsooni laakiin qof walba wuu ogyahay isla waqtigaas waxa laga filayo iyaga kaddibna waa inaad ku noolaataa kartidaada.”
“Qaar ka mid ah waxay inala sameeyeen labo ama seddex kahor-xilli-cayaareedka. Qaar ka mid ah waxay rabaan inay raadiyaan gabi ahaanba fursad ay kusii joogaan, qaar ka mid ah waxay rabaan inay baxaan. Iyagu waa beni-aadam, iyagu ma’ahan aalado, waana sababta ay u tahay inan u aqbalno inaanay u ahayn xaalad ku wanaagsan iyaga.”
“waa koox aad u fiican, howlkar ah, oo ay ka buuxaan rabitaan wax barasho, gaajoonaya tababar kasta diyaarna u ah inay socdaan.”
Napoli iyo Lazio Oo 15 Milyan Ku Doonaya Shaqiri